Fil d'actualités du 20/03/2019
20/03/2019 - 17:00 : ANTALAHA: Nodoran'ny olona ny Biraon'ny Jirama noho ny resaka delestazy any an-toerana, izay efa nanomboka ny volana janoary no nisiany.
20/03/2019 - 14:40 : BAOLINA KITRA: Misy lalao ara-pirahalahiana ataon'ny Nosy MAYOTTE sy ny ekipan'ny CUA USCAFOOT amin'izao ora izao ao amin'ny kianjan'Imahamasina
20/03/2019 - 11:00 : MINISITRA KANDIDA DEPIOTE : Dinihina ao anatin’ny filan-kevitry ny minisitra anio ny fanesorana ireo minisitra roa nirotsaka ho kandida solombavambahoaka.
20/03/2019 - 10:30 : KANDIDA DEPIOTE VEHIVAVY : Miisa 126 ireo kandida vehivavy voaray ho mpifaninana amin’ny fifidianana depiote, izay manome 15% eo ho eo.
20/03/2019 - 10:00 : FANAFIHANA MPANATITRA VOLA TAMIN’NY BANKY : Efa fantatra ireo jiolahy nanafika nitondra moto nanafika mpandraharaha hanatitra vola tamina banky iray teny Andranonahoatra Itaosy, ary eo am-pikarohana azy ireo ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao.
20/03/2019 - 09:30 : VEHIVAVY MALAGASY ANY KOWEIT: Miisa 58 nitsoaka tamin'ny mpampiasa azy, ary miangona amina toerana iray, ka ny 8 marary. Giazan'ny mpampiasa ny pasipaoro sy ny antontan-taratasy.
20/03/2019 - 09:00 : FRANKOFONIA: Andro iraisam-pirenena ho an'ny tany mampiasa manontolo na amin'ny ampahany ny teny Frantsay na ny Frankofonia ny 20 martsa tahaka izao.
19/03/2019 - 13:00 : FIFIDIANANA SOLOMBAVAMBAHOAKA: 803 ireo kandida ho solombavambahoaka ao anatin’ireo fari-pifidianana manerana ny nosy araka ny fanambarana nataon’ny CENI androany. 59 kosa no nolavina, izay mbola manana 48 ora hamenoana ny fepetra.
19/03/2019 - 12:30 : SABOTSY NAMEHANA: Niakatra ho 700Ar nanomboka omaly ny saran-dalana mampitohy azy amin'ny Renivohitra.
19/03/2019 - 12:00 : FIFIDIANANA DEPIOTE: Tsy maintsy mametra-pialana ireo minisitra roa rehefa voaray ny antontan-taratasiny, hoy ny fanazavan'ny Filoha lefitry ny CENI Thierry Rakotonarivo.
Archive du 20180817
Fanavotam-pirenena Any amin’i Dada ny lakile
Any Toamasina nanomboka omaly alakamisy 16 aogositra Atoa Marc Ravalomanana.
Fitoriana an-dRajoelina nolavin’ny HCC Nafindra eny amin’ny tribonaly indray
Rehefa nolavin’ny teo anivon’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC etsy Ambohidahy ny fitoriana napetraky ny teo anivon’ny hetsi-bahoaka ho an’ny tena fanovana sy ny fanorenana ifotony ny talata teo dia napetrak’izy ireo tetsy amin’ny fitsarana etsy Anosy indray omaly.
Kandida ho filoham-pirenena Samy resy lahatra fa azo hanina ny lalana
17 taona lasa izay dia tarigetrana kandida ho filoham-pirenena iray tamin’ny fotoan’androny ny hoe “Amboary ny lalana eto Madagasikara !”.
Minisitra very seza Henjehin`ny eritreriny ve ?
Tsikaritra eny amin`ny tambajotran-tserasera fa mijery ny mpiray tanindrazana sy manampy ary manao asa soa ny minisitra very seza sasany.
Hery Rajaonarimampianina Hanao fanambarana eny Antaninarenina anio
Hanao fanambarana lehibe sy valandresaka eny amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina ny filoha am-perinasa Hery Rajaonarimampianina anio zoma 17 aogositra.
Mpisolovava Mamy Radilofe Kandidan’ny antoko RDS
Nanatitra ny taratasy filatsahan-kofidiany ho filoham-pirenena teny amin’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC omaly alakamisy 16 aogositra ny kandida Mamy Richard Radilofe,
Fampandaniana an-dRajoelina Mikofokofoka mafy ry Ratsirahonana
Miara-mivory sy miketriketrika mafy ireo ekipan-dRajoelina hanohana azy amin’ny fifidianana amin’izao, toa an-dry Norbert Lala Ratsirahonana,
Ny Rado Rafalimanana Fanandevozana amin’ny endriny vaovao ny “call center”
Nasiaka ny fanambaran’i Ny Rado Rafalimanana nandritra ny hetsika fandraisana mpiasa tetsy amin’ny Hotely Carlton omaly alakamisy 16 aogositra.
Lalandy Andriamitosy “Amin’ny 2038 vao tokony ho kandida Rajoelina”
Efa fiasan’Andriamanitra hatrizay ary mbola ataony ankehitriny ny mampitondra hafatra mazava mety miandry ny olona iray manan-daza ka nanam-pahadisoana lehibe eny anivon’ny fiarahamonina, hoy i Lalandy Andriamitosy.
Pierrot Rajaonarivelo Samy ilaina ny fifidianana sy ny fanorenana
Lasa mizara roa ny hevitry ny mpanao politika eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao,
Tontolo politika Maro ireo namadika an-dRajao tato ho ato
Azo heverina ny mety hanovan’ny Filoha ankehitriny ekipa amin’ity fifidianana filoham-pirenena ity.
Gasikara manankarena ambanin'ny tany. Miondan-kena nefa kere main-tany. Vitantsika samirery ve ny mitrandraka azy ? Sa ilaina ireo vahiny ampy fitaovana hanampy ?
Andriamanantena Jocelyn na i Joyce Mpanohana mavitrika ny mpilalao kitra Malagasy
Na dia maro amin’ny mpitia baolina kitra Malagasy toy ny any amin’ny firenen-kafa aza no mankafy an’ireo mpilalao kalaza iraisam-pirenena toa an-dry Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr …
Mba ataovy avo lenta ny fisaina e!
Efa mamofompofona propagandy ny tanàna satria efa misy ireo manao fampielezan-kevitra amin’ny endriny samihafa.
Taksibe 193 sy 133 500 Ar ny saran-dalana manomboka ny 01 septambra
Raha efa mampitaraina fatratra ireo mpandeha maro ny fiakaran’ny saran-dalana ho 500 Ar ho an’ireo mpitatitra mivondrona ao anatin’ny FMA eto an-drenivohitra dia fantatra fa hampiakatra ny azy ihany koa ny taksibe laharana 193 mampitohy an’Anosimasina Itaosy amin’Ampasampito.
MAGE 4 Hiaka-tsehatra fanindroany etsy Antsahamanitra
Noho ny fangatahan’ny maro, indrindra fa ireo mpankafy ny tarika Mage 4 dia hanatanteraka fampisehoana goavana etsy Antsahamanitra indray izy ireo ny alahady 26 aogositra ho avy izao manomboka amin’ny 3 ora folakandro.
Anosivavaka Maty rotiky ny bala ireo mpanao kidnapping
Nirefodrefotra ny basy tetsy Anosivavaka Ambohimanarina omaly takariva tokony ho tamin’ny 6 ora.
FIFAMPITIFIRANA TANY BELO TSIRIBIHINA
Eo ambany mason’ny mpizahatany mihitsy no raikitra ny fifampitifirana teo amin’ny zandary sy ny jiolahy.
Araka ny vaovao nampitain’ny « agence Associated Press » any Etazonia dia nodimandry omaly alakamisy 16 aogositra,
Kolikoly ara-nofo Tena misy kanefa tsy dia resahana firy, hoy ny Bianco
Notontosaina tetsy amin’ny Pavé Antaninarenina ny atrikasa momba ny atao hoe kolikoly ara-nofo, izay notarihin-dry zareo avy eo anivon’ny birao mahaleotena miady amin’ ny kolikoly eto amintsika na ny Bianco omaly.
Tari-dalana “iGuide” Hisintonana ny mpampiasa vola
Omaly alakamisy 16 aogositra no naseho tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny Hotely Carlton Anosy ilay tari-dalana ho an’ny mpandraharaha “iGuide”.
Fitadiavana asa eto Madagasikara Sakana ny tsy fahaizana mifehy ny teny vahiny
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny hotely Carlton Anosy omaly alakamisy ilay hetsika mandritra ny roa andro “3 in one Event” izay karakarain’ny AS’Sidus.